I-Geoinformatics, ushicilelo lwe-7… i-GIS kunye nokuninzi kwi-Hispanics-Geofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/I-Geoinformatics, i-7 edition ... I-GIS kunye neninzi ye-Hispanics
AutoCAD-AutoDeskGeospatial - GISezintshaMicrostation-BentleyTopography
I-Geoinformatics, i-7 edition ... I-GIS kunye neninzi ye-Hispanics
Uhlelo lwesibhozo lwemagazini ye-Geoinformatics luyafumaneka ngoku, olukhanya kwindlela ye-GIS kwinqanaba le-geofumed nje "elimangalisayo", nangona litsalela ingqalelo yethu ukuba ngesi sihlandlo kukho inqaku elingaphezulu kwesinye kunye nendlela esekelwe kumava avela kwiSpanish- amazwe athethayo.
Elinye lala manqaku ngeendlela zakhe eziphambili projekthi ye gvSIG, sicinga ukuba yimpumelelo ebonakalayo yokubonakala kweyathelo elibiza irhafu yabantu kwaye ukuba uqhubeke ngezinga elikhawulezayo libe yinto efanelekileyo kakhulu yokusetyenziswa kwamahhala.
Ewe, ukuba ayinakuphucula phambili ukuphuhliswa kwayo, ingaqhubeka isakhelo kuhlolwa "Ngoochwephesha bokugebenga i-ArcGIS" abathi kwiimeko ezininzi banyanisekile kodwa bathanda ukungaboni kuba izicelo eziqalwe ngurhulumente zihlala zibonakala zicotha… okanye ngenxa yokuba bengawuthandi umthombo ovulekileyo.
2. IMexico ...
Enye into esonwabileyo ukubona Ukutshintshela imiqolomba yaseNaica, eMexico Inqaku elinomdla malunga neemeko eziphezulu zokuskena kwe-laser ...
Ayibonisi kuphela indlela yokusebenza kodwa ezinye izigqibo nangona umsebenzi ungekagqitywa. Ngexesha elililo kubahlobo bethu baseMexico, ifoto yokugubungela imalunga neli nqaku, ibonisa indlela ekufuneka uzenze mntu uzimele ngayo ukuze wenze olo hlobo lokuthimba, akukho nto yakwenza nomhlobo wethu ovela kumanxweme ahamba ze, hehe.
3. Imephu yeWebhu ye-2.0 ...
Yintoni esihogayo esiyiqondayo kwiwebhu 2.0 ... nge. Ewe ayisiyo inguqulelo yokoqobo kodwa inqaku elizama ukutshaya kwiindlela ze-Intanethi kwinto esiyaziyo isizukulwana 2.0.
Kwisiba seLambert-Jan Koops umxholo wezicelo zewebhu ezineemephu zegadys kunye nezinto zokudlala kunye ne-GIS ekwi-Intanethi ichukunyisiwe. Into enomdla kukuba umntu otshayayo ukhankanya iimveliso ezinje ngeMephuGuide (AutoDesk) kunye neProjekthiWise (bentley), ukwenza ulwalamano nangona kulula, kucacile ukuba yintoni le mizekelo yezinto zobugcisa zobugcisa kwezobugcisa ukwabelana ngeengcamango zokuphucula ingqiqo.
Ukujoliswa kwezicelo zewebhu kubonakala kumanqanaba amane, ukususela kwi-zero eqinisweni:
0. Zizo zicelo ezisebenza kwi-intanethi kunye Ungaxhunyiwe kwi-intanethi.
1. Zizo zicelo ezisebenza nge-intanethi kunye Ungaxhunyiwe kwi-intanethi kodwa zisebenza ngokusemandleni kwaye zisebenza ngendlela edibeneyo.
2. Kule meko, ezi zicelo kufuneka zisebenze on y Ungaxhunyiwe kwi-intanethi, ukusetyenziswa kwayo okuxhunyiwe kungenakwenzeka, kunjalo Umhlaba ka-Google.
3. Le yimeko yezicelo ezisebenza kuphela online, njengoko kunjalo nge-wikipedia.
Ngaphandle kwale, ebonakala kum ukuba iklasikhi, kukho elinye inqaku elithi “Apho i I-GIS kunye nehlabathi elipheleleyo lidibana…” inika umdla malunga nenyani eyinyani esetyenziswa kwi-GIS… nangona ingeyiyo yonke into enokukholelwa ukuba iyasebenza.
UFritz Zobl noRobert Marschallinger bakhanya uthetha nge Geo BIM, eli xesha lichaphazela indlela yokwenza ubugcisa bezobunjineli kunye nobunjineli bomsebenzi.
Kwakhona kule nkalo yendlela yokwenza imimandla yendawo kukho inqaku elibonisa ukuhlanganiswa izixhobo ezikude kunye ne-GIS, ngokusebenzisa imodeli yendawo yokuphuma kwephosphorus ...
5. Izixhobo zokusebenza
Ukuqhubeka kunye nophando lwezixhobo zezolimo ye sixhenxe, kule meko kukho ukuhlaziywa kwesitishi esiphezulu se-robotic Leica TPS 1200 +
Isizukulwana esitsha sikaJena. Kule nqaku ezinye iincwadi ezintsha zokubonwa kwezizwe ziboniswa.
Zeziphi izinto zokudlala ezintsha azizisa uMagellan ... simele sibone oku, ngokuba iMagellan kunye nokuthengisa kwayo rhoqo kwaye akukho mntu uyaziyo oxhasa kunye nokuqhubeka nokuyila.
6. Kukho okungakumbi ...
Ndingakucebisa ukuba ufunde kwi-intanethi okanye uyikhuphe njengowama-pdf ekuqokeleleni kwakho, nje ulinganise i-12 MB kwaye uyikhuphe ngokukhawuleza.
AutoDesk Bentley Systems Umhlaba ka-Google GvSIG OS Magazines
I-Google Earth kwi-Uncyclopedia yeWiki
Ekugqibeleni ndibuya, kwaye ndihamba
Miguel Angel Gómez uthi:
Ngokuqhelekileyo ndihlala ndibandakanyeka ekuqhubeni uphando lweepographical to polygonal nokucacisa izicwangciso zabo zeefadastral. ngoko ndinomdla ekuxininiseni kwizihloko ezihlobene nomsebenzi wam.
Ukuphela kweprojekthi ngo-Oktobha ka-2012;
IZizwe eziManyeneyo (i-NGO Branch - iCartography yeCandelo) lenza indawo yokuhlala ye-LEICA ngexabiso elikhethekileyo le- $ 1.000 (iUS $ 1.211);
Iindleko zokuthumela zixanduva lwakho, ziyahlukahluka kuxhomekeke kwilizwe lokuthenga kwaye lihlawulwa ngaphambi kokuthunyelwa.
Izitishi ezipheleleyo zeLeica robotic ezithengiswayo:
- 8 Leica TCRP 1205 R300 R300 1203 kunye neTCRP
-I-Leica GX4 GPS RTK
Imeyili yoqhagamshelwano: un.org.ngo@gmail.com
IZizwe eziManyeneyo-Igumbi S-1093
Ndicinga ukuba linyathelo elilungileyo ... into andazi ukuba bazokuyilungisa njani kamva xa uGoogle ethatha isigqibo sokudibanisa imifanekiso yokuchaneka okuhle, sele inalo lonke ulwazi olufakwe ngabasebenzisi.
Ukuthetha ngeWebhu 2 kunye ne-GIS, ndicinga ukuba uMenzi weMephu kaGoogle (isixhobo esikwi-intanethi sokongeza / ukwenza idatha kwiimephu zesitalato zikaGoogle) ngowona mzekelo unamandla. Phantse yonke i-India ibhalwe ngale ndlela, ngegalelo lamawaka abantu ngeli phepha lewebhu. Umsebenzi okhe waqinisekiswa walungiswa uya kunceda izigidi zabantu ixesha elide. Isisombululo esikhulu samazwe asahlumayo, apho abezopolitiko bazonwabisa ngokuzonwabisa ngokwenza imali endaweni yokufaka izinto eziluncedo kuluntu olubondlayo.
Imibuzo emangalisayo malunga nobuchwepheshe beCAD / GIS